कोरोनाभाइरस : पछिल्लो २४ घन्टाको तथ्यांकले के संकेत गर्छ ? के सल्लाह दिन्छ ? Canada Nepal
कोरोनाभाइरस : पछिल्लो २४ घन्टाको तथ्यांकले के संकेत गर्छ ? के सल्लाह दिन्छ ?
काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २५ सय ८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिएको छ । यससँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या १ लाख ७० हजार ७४३ पुगेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको समयमा डा. रवीन्द्र पाण्डेले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र बच्ने बिभिन्न उपायहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिइरहेका छन् ।
यस्तै शनिवार डा. पाण्डेले पछिल्लो २४ घन्टाको तथ्यांकले दिने संकेतको बारेमा बताएका छन् । उनले भनेका छन् -
पिसिआर टेस्ट – ९२७९
संक्रमित – २५०६
संक्रमण प्रतिशत – २७ %
उपत्यकामा संक्रमित – १२५७ अर्थात ५०.१ %
सक्रिय संक्रमित – ३८५८४
होम आइसोलेसन - ३१००८
संस्थागत आइसोलेसन वा अस्पतालमा – ७५७६
क्वारेन्टिनमा - २४१०
यो तथ्यांकले देखाउंछ -
- परीक्षण निकै कम भयो ।
- संक्रमण प्रतिशत धेरै भयो ।
- काठमाडौं उपत्याका बिष्फोटक अवस्थामा पुग्यो ।
- मृत्युदर बढ्दैछ ।
- क्वारेन्टिनमा असुविधाको कारण त्यहाँ बस्ने एकदम न्यून भए ।
- संस्थागत आइसोलेसन प्रभावकारी भएनन् ।
- यति सानो संख्या होम आइसोलेसन बाहिर हुँदा पनि अस्पतालमा बेड अपुग छ ।
- ९६ जना आइसीयुमा तथा ६९ जना भेन्टिलेटरमा हुँदा कसरी आइसीयु प्याक भए ? जब कि सरकारले २६०० आइसीयु र ९०० भेन्टिलेटर छन् भनेको छ ।
तथ्यांकले के सल्लाह दिन्छ ?
- परीक्षण दर जतिसक्यो धेरै बढाउनुपर्छ ।
- संक्रमितलाई प्रभावकारी ठाउँमा निगरानी गरेर आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ ।
- सुविधाजनक आइसोलेसन केन्द्र हरेक वडामा निर्माण गर्नुपर्दछ ।
- काठमाडौं उपत्याकामा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको अनुगमन तथा निगरानीमा कडाइ गर्नुपर्छ ।
- अस्पतालमा दैनिक बेड अडिट गर्नुपर्छ | खालि भएर पनि बेड लुकाउने अस्पताललाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
- ३ वटा ठूला मेडिकल कलेज, ३ वटा ठूला सरकारी अस्पताल र ३ वटा ठूला प्राइभेट अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा परिणत गर्नुपर्छ । उपत्यका बाहिर पनि संक्रमितको संख्या अनुसार यस्तै ब्यबस्था गर्नु पर्दछ ।
- सेनालाई साधन / स्रोत र स्थान दिएर प्रिफ्याबका अस्थायी अस्पताल बिभिन्न ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्छ ।
- हरेक बेडलाई अक्सिजन बेडको रुपमा बिकास गर्नुपर्छ ।
- हरेक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट अनिबार्य गर्नुपर्छ ।
- हामी आम नागरिक थप अनुशाशित र सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
कार्तिक १५, २०७७ शनिवार १९:०२:२४ बजे : प्रकाशित